Lixda Koox Ee Premier League-ga Ugu Waaweyn Oo Isaga Baxay European Super League + Warbixin – Garsoore Sports
Lixda Koox Ee…
Manchester United, Liverpool, Arsenal iyo Tottenham ayaa raacay kooxaha Chelsea iyo Manchester City oo ka baxay qorshihii koobka muranka badan dhaliyay ee European Super League-ga.
City ayaa aheyd kooxdii ugu horreysay ee Premier League ee si cad u xaqiijisa inay ka baxeyso tartanka gooni u gooska ah fiidnimadii Talaadada.
Inkastoo warar kasii horreeyay ay sheegayeen in kooxda Chelsea ay isaga baxday tartanka.
Hoggaamiyaasha Premier League-ga ayaa bayaan ay soo saareen fiidnimadii Talaadada ku yiri “Kooxda Kubbada-cagta ee Manchester City waxay cadeyneysaa inay si rasmi ah u dhaqan galisay hanaankii looga bixi lahaa kooxdii sameysan laheyd qorshooyinka European Super League.”
Isla xili-dambe oo habeenkii talaadada ahaa, afarta ka hartay ee ‘Big Six’ ee Premier League ayaa ku dhawaaqay inay ka laabanayaan xubinnimadooda Horyaalka gooni goosadka ah ee dhaqaale raadin ay u geysay ee European Super League-ga kaddib cadaadis badan oo uga yimid ciyaartooyda iyo taageerayaasha.
Maalintii isniintii ayay ahayd markii la shaaciyay in 12 koox oo kamid ah kooxaha ugu tunka weyn qaarada Yurub ay ku biireen koobka European Super League ga lagu magacaabo taas oo muran badal dhalisay iyadoo walwal kale uu yimid kaddib markii Xariirka kubbada cagta yurub ee UEFA ay ku dhawaaqday in koox kasta iyo ciyaartoy kasta oo ka qayb galaya European Super League-ga laga ganaaxi doono dhammaan tartamada Yurub iyo kuwa heerka caalami.
Xariirka kubbada-cagta adduunka ee FIFA, wuxuu isna muujiyay sida uu uga xun yahay horyaalka cusub ee European Super League.
Maxaa loogu biirayaa tartankan?
Mid ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha waaweyn ee gadaal ka riixaya European Super League-ga waa madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez, isagoo ku andacoonaya inay “badbaadin doonto kubbada-cagta” wuxuuna sabab usoo qaatay in aysan dhalinyarada xiiso weyn muujineyn maadaama cayaaro liita la cayaaro waayahan.
Naadiyada lagu aas-aasayo koobkan waxaa loo balan qaaday £3.5 billion oo deeq ah, oo uu bixinayo bangiga maalgashiga ee JP Morgan.
Intooda badani waxaa lagu leeyahay deyn aad u badan, oo ay usii dheertahay aafada Covid 19 taas oo sabab u noqotay carqaladeyn joogto ah iyo daawadayaal la’aan sababtay in ay meesha ka baxaan ilihii ugu waaweeynaa ee dakhligooda.
Naadiyada waa weyn qaarkood waxaa usii dheer iney leeyihiin ciyaartooy caan ah oo mushaar ahaan ay u siiyaan malaayiin Euro sannadkii.
Ha ahaatee, Haddii loo damaanad qaadi karo ka qeyb qaadashada tartan weyn oo Yurub ah sannad walba oo ay usoo baxayaan iyagoo aanan tartan kale kasoo gelin xaga horyaaladooda maxaliga ah, waxaa markaa yaqiin ah in ay ku dhaqaaqi karaan.
Haddii uu suuragalo oo uu dhaqangalo koobkan European Super League waxaa hubanti ah in uu noqon doono mid kooxuhu ay ku faa’iidaan dhaqaale ahaan, balse in laga guuro koobka Taariikhiga ah ee Champions League-ga ayaa runtii ah wax aad u adag.